बालुवाटारमा कलाकार पुग्दा दीपकको टाउको दुख्यो – Mero Film
बालुवाटारमा कलाकार पुग्दा दीपकको टाउको दुख्यो
२०७५ साउन ७ गते १२:३८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्देशक दिनेश डीसी नजिक छन् । नजिक भएरै त होला, ओलीले डीसीलाई भारत भ्रमणमा समेत लिएर गएका थिए ।
उनै ओलीसँग नेपाली फिल्मका कलाकारले भेट गरे । ओलीसँग कलाकारको भेटघाटको चाँजोपाजो उनै डीसीले मिलाएका थिए । डीसीले चाँजोपाजो मिलाएर प्रधानमन्त्रीले कलाकार भेटेपछि निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीलाई भने टाउको दुखेछ ।
गिरीले फेसबुकमै स्टाटस लेख्दै ‘एक झुन्ड पूराना पुस्ताका कलाकारहरूलाई वालुवाटारले सल्लाह गर्न बोलाएछ, हाललाई हामिसँग भन्दा पनि गोबिन्द केसिको बिषयमा सल्लाह गरे राम्रो हुन्थ्यो कि?’ भनेर स्टाटस लेखे र गुनासो पोखे ।
हुनत, यो स्टाटसमा गिरीले डाक्टर केसी बारे चिन्ता व्यक्त गरेको देखाएका छन् । तर निर शाहदेखि संचिता लुइटेलसम्म भेटघाटका लागि पुगेका थिए । गिरीले एक झुन्ड पुराना पुस्ताका कलाकार भनेर उनीहरुको अपमान त गरेका होइनन् ? कि उनले दिनेश डीसीप्रतिको आफ्नो दुश्मनीलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरेका हुन् ।
गिरिले पुराना पुस्ताका एक झुन्ड कलाकार भनेपछि उनलाई कमेन्टमा पुराना पुस्ताका कलाकारको सम्मान गर्न धेरैले आग्रह गरेका छन् ।
डीसीसँगको रिसलाई गोविन्द केसीसँग जोडेर गिरीले पुराना पुस्ताका कलाकारको अपमान गर्न खोजेको आरोप कमेन्टमा आफ्नो भनाई राख्नेहरुको छ । दिपकराज गिरी, आवेशमा पो आएका हुन् कि ?
One thought on “बालुवाटारमा कलाकार पुग्दा दीपकको टाउको दुख्यो”
सन्देश थारु says:
यो समाचार को शीर्षक मिलेन दिपक राज गिरि ले यथार्थ कुरा गर्दा कुन पत्रकारको टाउको, मुटु कलेजो दुख्यो हौ।
अब अर्को समाचार प्रकाशन गर्नुपर्यो ” दिपकको अभिव्यक्ती मा पत्रकारको टाउको दुखाइ ” शिर्षक को
छ कसैमा हिम्मत????